Ho valin’ny tsy fahampiana dia miverina ny famatsiana oksizenina hiatrehana ny COVID-19 | UNICEF Madagasikara
Ho valin’ny tsy fahampiana dia miverina ny famatsiana oksizenina hiatrehana ny COVID-19
03 Jona 2021
Nametraka fanamby goavana teo amin’ny rafitra ara-pahasalamana izay efa marefo ny andiany faharoan'ny COVID-19 teto Madagasikara, sady nitarika filàna maika mikasika ny famatsiana oksizenina hampiasaina amin'ny fitsaboana ilay otrik’aretina.
Mbola tsy tonga lafatra ny fotodrafitrasa entina mamatsy ranoka oksizenina eny amin’ireo hopitaly lehibe eto Madagasikara. Nandritra ity andiany faharoan'ny valan’aretina ity dia niankina betsaka tamin'ny oksizenina entona, izay novokarin’ny milina mpamokatra tena tranainy sy tsy voakarakara, i Madagasikara.
Iray amin’ireo vahaolana ny fiezahana mamaly ny filàna maika entina miatrika ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny varingarina oksizenina. Voafetra tokoa anefa izany noho ny tsy fahampian’ny tavoahangina oksizenina sy ny tsy maintsy hanafarana varingarina fanampiny avy any ivelany.
Ho fanampin'izany, ireo varingarina nafarana dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fepetra takiana eto an-toerana ary halefa any amin'ny hopitaly manerana ny nosy.
Na eo aza ireo fanamby ireo dia tsy nijery fotsiny ny UNICEF fa nanohy ny famatsiana ôksizenina lehibe indrindra ho an'ireo hopitaly teto amin'ny firenena hatrany. Tanteraka izany nohon’ny fifanarahana maharitra izay nampiharina tamin'ny taona 2020 niaraka tamin'ny orinasa roa teto Madagasikara momba ny famatsiana oksizenina.
"Tsy mora ny fomba fiasa, ary tena tsy maintsy nanana fahavitrihana be izahay," hoy i Anne Cabrera-Clerget, mpitantana ny sampana famatsiana ao amin’ny UNICEF. "Ny volana aprily 2021 no tena fotoan-tsarotra, ary izahay dia afaka nampivondrona ny sehatra tsy miankina sy ny Minisiteran'ny Fahasalamana mba hiadiana hevitra mikasika ireo mety ho vahaolana manoloana ny tsy fahampian’ny oksizenina. Avy eo ny fifanakalozan-kevitra dia nihitatra hatrany amin’ny sampana famatsiana ao amin’ny UNICEF izay afaka nahita mpamatsy ôksizenina ranoka sy entona manerantany."
Orinasa lehibe telo, Air Liquide, EO2LE ary Industrial Gaz of Madagascar no nanatevin-daharana ny vondron-kery entina miatrika ny valan’aretina. Nisy ny fifanarahana maharitra niaraka tamin'ny EO2LE sy Air Liquide tamin'ny taona 2020 ho fiatrehana ny COVID-19, tamin'ny Industrial Gaz of Madagascar izay nanatevin-daharana ny ezaka tamin'ny 2021. Izany dia niantoka ny fanohanana maharitra ny rafitra famatsiana oksizenina teny amin'ny hopitaly maro teto Madagasikara.
"Ny fahazoana famatsiana tsy ankiato dia fanamaivanana lehibe ho an'ny hopitalinay satria ho sarotra kokoa ny hanavotra ain’olona raha tsy misy ireny tavoahangina oksizenina ireny", hoy ny fanazavan'ny Jeneraly Andriamparary Rafetrason Josoa, Tale teknika ao amin’ny Hopitaly Miaramila eto amin'ny firenena, iray amin'ireo toeram-pitsaboana lehibe mitsabo ny covid19. “Ireo fitaovana ireo dia tonga tamin’ny fotoana tena nilàna azy ka niaro ireo hopitaly mba tsy hikorontana tanteraka nohon’ny tsy fahampian'ny oksizenina mahery vaika.”
A.M. Ratsimbazafy dia nivezivezy teny amin'ny hopitaly nandritra ny tapa-bolana mba hitsaboana ny vadiny tratran’ny COVID-19. "Raha tsy nahazo oksizenina izy mba hahatratrarana ilay haavon’ny oksizenina ao amin’ny rà 96% dia maty," hoy izy. Ny oksizenina dia ilaina tsy amin'ny fitsaboana COVID-19 ihany fa amin'ny fitsaboana marary hafa marobe.
Rakotomalala dia nanao fanamarihana mitovy amin’izany ihany koa rehefa nitsabo ny rafozam-baviny 70 taona. “Notsaboina tany amin'ny hopitaly izy efa ho telo herinandro. Raha tsy nisy ny oksizenina tamin'ny fitsaboana azy dia tsy fantatray izy raha ho tafavoaka velona," hoy izy.
Tao amin'ny Hopitaly Ravoahangy Andrianavalona izay hopitaly lehibe indrindra eto Madagasikara, ny Tale Teknika Dr. Rasoarinoro Lalao dia nitantara ny ady natrehan’ireo mpiasa tamin’ny fitsaboana ireo marary izay nitombo isa be tokoa talohan'ny nahatongavan'ireo entana fanampiny. “Fotoana tena sarotra io satria niezaka nitsabo mararin’ny COVID-19 miisa 120 isan'andro izahay. Ho an’ny ‘forme grave’ dia mety mila tavoahangina oksizenina dimy isan'andro ny marary iray. Afaka nitsabo ny olon-drehetra izahay noho ireo fanomezana oksizenina maimaimaimpoana ireo.”
Niaiky i Dr Lalao fa noho izy hopitaly tranainy indrindra eto Madagasikara dia misy ny fahalemena eo amin'ny lafin’ny fotodrafitrasa ao aminy.
Mba hamahana izany olana izany, ny ezaka niarahan'ny UNICEF, ny sehatra tsy miankina ary ny Minisiteran'ny fahasalamana tamin'ny volana Mey dia nanandrana vahaolana maharitra kokoa amin'ny famatsiana varingarina oksizenina. Nisy ny andrana notanterahina teny amin'ny hopitaly lehibe indrindra eto Antananarivo izay nampiasa oksizenina ranoka mba hiova ho oksizenina entona izay nampidirina tamin’ny fitaovana famatsiana oksizenina tao amin’ilay hopitaly, rafitra iray antsoina hoe CryoTanks. Nahomby io andrana io. Ny rafitra ao amin’izany hopitaly izany dia mbola vatsian’io fomba famatsiana io ary ankehitriny dia dinihina ny fampiasana izany eny anivon’ny hopitaly efatra hafa izay mitsabo ny COVID-19.
Noho ny fandraisana anjaran'ny UNICEF sy ireo mpiara-miombon’antoka, ary miaraka amin'ny fanohanan'ny Banky Iraisam-pirenena dia voavaly ny filàna oksizenina ho an’ireo mararin’ny COVID-19 eto Madagasikara nanomboka tamin’ny faran'ny volana aprily ka hatramin'izao. Drafitra iray izay hampivelarana bebe kokoa ny famatsiana oksizenina manerana ny nosy no andalam-pamolavolana ankehitriny ary nisitraka ny fahaiza-manaon’ny UNICEF izany. Tamin'ny volana Mey, nisy “concentrateurs d’oxygène” miisa 200 no tonga teto Madagasikara, nohon’ny fanohanana ara-bola avy amin'ny rafitra famatsiam-bola ACT-A ao amin’ny UNICEF.
Ny taona 2020 dia Tavoahangy oksizenina miisa 12.771 sy “concentrateurs d’oxygène” 21 no nampiasaina tamin'ny fitsaboana nila oksizenina nandritra ny fito volana tao amin'ny faritra telo izay voa mafy indrindra tamin'ny COVID-19 . Hatreto, nandritra ny andiany faharoan’ny valan’aretina dia tavoahangina oksizenina 13.500 no natolotra ho an'ireo marary ao amin'ny tobim-pahasalamana 35 sy hopitaly any amin'ny faritra 11. Ireo mpanohana ny ezaka famonjena aina dia tsy iza fa ny Banky Iraisam-pirenena, ny Governemantan'i Danemarka, ny governemanta Kanadiana ary ny Sampan-draharahan’ny fanampiana mahaolona sy fiarovana sivily sivily (ECHO).
08 Jona 2021
« Concentrateurs d’oxygène » 200 atolotry ny UNICEF ho an'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka
Miverina ny famatsiana oksizenina hiatrehana ny COVID-19
Ny fandaharan’asa Tosika Kere any atsimon'i Madagasikara
Nahazo ainga vao indray ireo tokantrano tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo noho ilay fandaharan’asa Tosika Kere